HIARA-MIENTANA AMINAY - Transparency International - Initiative Madagascar
Fandraisana mpiasa (0)
Antso tolobidy (1)
Midira ho Mpanohana
Te hiara hientana aminay ve ianao hiady amin’ny kolikoly ?
*Araho izahay amin’ny pejy Facebook sy twitter, zarao ireo hetsika tontosainay ary resao amin’ireo manodidina anao izany!
*Mandraisa anjara an-tsitrapo amin’ny hetsika ataonay ! Zava-dehibe ny ady amin’ny kolikoly ary manana fotoana kely ianao ? Manorata hafatra kely ho anay amin’ny contact@transparency.mg! Hampahafantarinay ianao rehefa mila mpilatsaka an-tsitrapo izahay (asa tsy handraisa-karama).
*Alefaso aminay ny hevitrao mahakasika asa na hetsika entina miady amin’ny kolikoly amin’ny contact@transparency.mg!
*Manomeza fanampiana! Transparency International-Initiative Madagascar dia fikambanana fehezin’ny làlàna Malagasy izay mivelona amin’ireo fanampiana ara-bola amin’ireo tetikasa sy ireo tolotra! Ireo sampan’i Transparency International dia tsy miankina ary tsy mahazo fanohanana ara-bola avy amin’ny foibe. Raha te hanome fanampiana ianao dia mandefasa hafatra aminay amin’ny contact@transparency.mg.
Raha te hiditra ho mpikambana ianao na te hahafantatra misimisy kokoa mahakasika ireo hetsika ataonay, aza misalasala mifandray aminay!
+261 (0)20 22 288 73 / +261 (0)34 96 418 79
Hitanao eto amin'ity pejy ity avokoa ireo tolotr'asa misy eo anivon'i Transparency International-Initiative Madagascar.
Fanamboarana sy fanatsàrana tranon-kala
Transparency International - Initiative Madagascar (TI-IM) dia sampanan'ny ONG Transparency International izay miady amin'ny kolikoly eto Madagascar.
TI-IM dia hanamoboatra tranon-kala izay hanampariahana vaovao, ary ao anatin'izay ihany koa ny fanantsarana ny tranon-kala an'i TI-IM amin'izao fotoana izao (www.transparency.mg)
Mizara roa ny asa atao:
Fanamboarana ny tranon-kala vaovao
Fanantsarana ny tranon-kala (www.transparency.mg)
Ato raha te ahalala be be kokoa
Midira ho mpikambana! Ankehitriny, ny Fikambanana dia misy mpikambana miisa 13. Ny fivoriam-be dia mivory indray mandeha isan-taona. Ny Fivoriam-be no mifidy ny Filan-kevim-pitantanana.
Ireo mpikambana dia mandray anjara amin’ireo Fivoriam-be mahazatra sytampoka , ary ireo hetsika tontosain’ny Fikambanana. Izy ireo dia tokony hanana fitondran-tena mifanaraka amin’ireo foto-kevitrin’ny Transparency International-Initiative Madagascar.
Ireo mpikambana dia tsy maintsy mandoa latsakemboka isantaona.
Raha hiditra ho mpikambana dia tokony handefa ny atonta-taratasim-pisoratan’anarana aty amin’ny Fikambanana. Io atonta-taratasy io dia misy ny CV, ny lettre de motivation ary ny registre d’intérêt-n’ilay olona te hisoratra anarana. Taorian’ny fandinihana ireo atonta-taratasy dia miroso amin’ny fihaonana mivantana. Avy ireo fisoratana anarana izay ho voatana dia halefa any amin’ny Filakevim-pitantanan-draharaha ary ho dinihina mandritry ny Fivoriam-ben’ireo mpikambana.
Ny toerana maha-mpanohana dia natokana ho an'ireo olona te hiara-mientana amin’i Transparency International-Initiative Madagascar amin’ny ady amin’ny kolikoly.
Ireo mpanohana dia mandray tsy tapaka ireo vaovao manodidina ireo hetsika ataon’ny fikambanana, mandray anjara amin’ireo izy arakaraky ny fahafahany.
Ankoatr’izay, anatin’ny hetsika ataon’izy ireo amin'ny andavanandrony na amin'ny asany dia tokony hitàna mandrakariva ireo fotokevitra hijoroan’ny Transparency International-Initiative Madagascar izy ireo.
Maimaimpoana ny fandraisan’anjaran’ny Mpanohana amin’ireo hetsika. Mirotsaka an-tsitrapo izy ireo ary tsy mandray karama. Izy ireo koa dia tsy manefa latsakemboka.
Raha te ho isan’ireo mpanohana ianao, azonao atao ny mandefa ny antonta-taratasim-pisoratana anarana misy ny CV sy ny taratasy manazava ny antony maharisika anao hiditra amin’ny Fikambanana amin’ny communication@transparency.mg.
Orinasa ve ianareo?
Raha maniry ny hanohana ireo asanay amin'ny alalan'ny fanohanana ara-bola, na ara-pitaovana na ara-tenika dia azonareo atao ny mandefa mailaka aminay: directeur@transparency.mg.